Fa maninona i John Cena no nijanona tsy nanao rap tamin'ny WWE? - Wwe
Fa maninona i John Cena no nijanona tsy nanao rap tamin'ny WWE?
John Cena dia, tsy isalasalana, iray amin'ireo Superstars WWE lehibe indrindra tamin'ny fotoana rehetra. Ny fahaizany tsara eo amin'ny peratra, miaraka amina fahaiza-manao mic tsy azo ampitahaina, no nahatonga azy ho iray amin'ireo mpifaninana tsara indrindra amin'ny tantaran'ny WWE. Ny toetra mampiavaka an'i Cena dia namela azy ho lasa endrin'ny WWE.
Na izany aza, tsy dia tsara loatra ho an'ny Cenation Leader ny zava-drehetra.
Talohan'ny nahatongavany tany amin'ny tampon'ny indostrian'ny tolona, ​​talenta karatra afovoany ihany i John Cena tao amin'ny WWE. Tsy raharaha lehibe izy tamin'ny voalohany ary ho very ny ankamaroan'ny lalao. Soa ihany, namonjy ny asany nilentika i Cena tamin'ny fanovana azy ho The Doctor of Thuganomics.
Inona ny toetran'ny 'Doctor of Thuganomics'?
Vidiny tamin'ny 2011.
Ny Doctor of Thuganomics dia mpiangaly rap iray izay nanompa ny mpanohitra tamin'ny fotoan-tsetrany. John Cena dia nitana ny anjara lavorary tanteraka. Ity gimmick ity dia malaza be amin'ny WWE Universe.
** @JohnCena Dokotera fankasitrahana Doctor of Thuganomics ** #RuthlessAggression pic.twitter.com/53iJen7SEW
- Tambajotra WWE (@WWENetwork) 14 Febroary 2020
Cena tenany ihany dia niresaka momba ny maha-zava-dehibe an'io toetra io ao amin'ny andiana fanadihadiana WWE Ruthless Aggression. Niaiky izy fa raha tsy niova ho Doctor izy dia mety tsy ho nahavita tamin'ny WWE.
Fa maninona i Cena no nandatsaka an'io endri-javatra WWE mpamonjy asa io?
John Cena ao amin'ny WrestleMania 35.
Tamin'ny 2005, nanomboka nanangana tsikelikely an'i Cena i WWE ho kintana lehibe manarakaraka azy ireo. Nivadika tsimoramora ho mpitondra ny saina WWE izy. Misy fitenenana malaza be hoe: 'Miaraka amin'ny hery lehibe dia misy andraikitra lehibe.' Noho izany, mba ho lasa kintana manerantany, dia nila nandatsaka ny persona masinina nataony i Cena ho an'ny persona mahay mandanjalanja kokoa.
Ny Cenation Leader dia nanamarika fa ny ankamaroan'ny mpanaraka azy dia misy ankizy. Tsy te hamela fiatraikany ratsy tamin'ny sain'ny mpihaino azy i Cena. Amin'ny maha Dokotera azy, indraindray i Cena dia tsy maintsy niampita fetra mba hampialana voly ireo mpankafy. Na dia nampiala voly ho an'ny olon-dehibe aza izy io, dia matetika no tsy mety amin'ny mpihaino tanora kokoa.
Inona no nitranga tamin'ity persona masinina ity manaraka?
Cena ao amin'ny WrestleMania 36
John Cena dia nisotro ronono tamin'ny gimmick Thuganomics tamin'ny taona 2005. Avy eo izy dia nivadika toetra amam-panahy mahery fo tena izy izay handresy ny sakana rehetra amin'ny lalany. Cena taty aoriana dia nanao fisehoana ivelany ho toy ny Dokotera taty aoriana tamin'ny asany.
Tonga eto ny Doctor of Thuganomics! #WWE #WrestleMania # Wrestlemania36 pic.twitter.com/taCNc7143J
- Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) 6 aprily 2020
Nandritra ny ady nifanaovany tamin'i The Rock tamin'ny taona 2011-12, niantso ny olona persona nitifitra ny Brahma Bull tamin'ny resaka fako i Cena. Nanao fisehoan-javatra WWE hafa izy tamin'ny naha Doctor azy vao haingana rehefa niady tamin'i Bray Wyatt tamin'ny lalao hafahafa Firefly Funhouse tao WrestleMania 36.
Te hahita ny Doctor of Thuganomics indray ao amin'ny WWE ve ianao? Mihainoa any amin'ireo fanehoan-kevitra.
ny fomba hisafidianana olona roa
ny fomba hitenenana mangingina amin'ny bandy tianao
mila mitomany aho fa afaka t
aiza no misy an'i shane dawson